MPITORITENY 4.1-16	F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
MPITORITENY 4.1-16	F. 6
Tsindry hazo lena. Zava-misy eo anivon’ny fiaraha-monina izay tsapan’i Mpitoriteny ny hamafiny ka mahatonga azy milaza fa sambatra ireo izay efa maty tsy misedra izany intsony (2). Fa mbola tsaratsara kokoa aza, hoy ihany izy, ny tsy ary akory ka tsy nahita izany fahoriana izany (3). Tena fahoriam-be izany mitranga izany matoa tahaka izany no fahatsapan’i Mpitoriteny azy.
Mbola misy hatramin’izao androntsika izao ve izany?
Eny, misy hatrany ny fampahoriana ny tsy manana saingy ny mahafaly dia ny fananantsika fampiononana avy amin’Andriamanitra satria Andriamanitry ny fampiononana Izy (2Korintiana 1.3) ary i Jesoa koa nitondra fanasitranana hoan’izay azon’ny fanaintainana ara-nofo (Matio 9.22) sady mbola nampanantena ny Fanahy Masina izay hitoetra eo amin’izay matoky Azy sy ho ao anatiny (Jaona 14.17).
Misasatra hitombo harena. Sady hitombo harena hoan’ny tena no hitombo harena bebe kokoa noho ny hafa, izany hoe toe-tsaina mifaninana. Izany no miseho eo amin’ny fiaraha-monin’ny olombelona miorina amin’ny haren’ny tany. Ka na ny olona mitoetra irery aza, tsy manan-kavana, dia mirona ho amin’izany. Saingy hoan’iza izay nisasarany? Ahatsiarovana ilay tantara fanoharana nambaran’i Jesosy ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka mikasika Ilay lehilahy mpanan-karena nihary fananana be dia be ka nilaza hoe: ”Ry fanahiko ô! Manana fananana be voatahiry hoamin’ny taona maro ianao, mifalia, mihinàna, misotroa. Ary nofaranan’i Jesosy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao ka hoan’iza izay nisasaranao?” (Lioka 12.13-20).
Fahendrena sy voninahitra. Ny mpanjaka efa zokiolona tsy mety anarina sy toroan-kevitra intsony dia ratsy lavitra raha oharina amin’ny tanora mahantra izay manana fahendrena (13).
Hoy ny Ohabolana : “Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrena” (Ohabolana 9.10a)